ဘွားဒေါ် ကိုဂျီး ဘဂျီး သို့ Madame and Sir | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ဘွားဒေါ် ကိုဂျီး ဘဂျီး သို့ Madame and Sir
ဘွားဒေါ် ကိုဂျီး ဘဂျီး သို့ Madame and Sir
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 15, 2013 in Opinions & Discussion | 26 comments
ဒီကိစ္စပြောချင်တာ ကြာပြီ၊ အခန့်မသင့်သေးလို့ ပြင်မလား ပြင်မလားနဲ့ ကြည့်နေတာ၊ အခုတော့ နဲနဲဖွပါမယ်။ ဒေါ်စု လွှတ်တော်တက်တဲ့ ဓာတ်ပုံ သစ်ထူးလွင်မှာ တွေ့ရတယ်။ ဘွားဒေါ်က ထုံးစံအတိုင်း တက်တက်ကြွကြွ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်နဲ့ပါ။ သို့ပေသိ သူ့နောက်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး သူ့လက်ဆွဲခြင်း၊ လက်ဆွဲအိတ်များ ကိုင်လို့ ပါလာတယ်။ အဲဒီလို အိတ်ကိုင်၊ ထီးမိုးပေးတာ ဘွားဒေါ် အပြင်ထွက်ရင် မကြာခဏ တွေ့နေရတော့ ရင်ထဲမှာ ကျလိကျလိ ဖြစ်လာတယ်။ ဘွားဒေါ်ကတော့ အဲလို ပြုမူစေချင်မယ် မထင်ဘူး၊ တားကောင်းတားပါ လိမ့်မယ်၊ မရတော့လည်း နင့်ထိုက်နဲ့နင့်ကံ မသိကျိုးကျွံ နေလိုက်ရပုံပဲ။ မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျို့… လူအမြင် မတင့်တယ်ပါဘူး။ “သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ” ကြွေးကြော်သံနဲ့ မြန်မာတွေ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှု အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ခဲ့တာပါ။ ဘွားဒေါ်က အသက်အရွယ် ကြီးနေလို့ အိုနာမကျန်း ဖြစ်နေလို့ဆိုရင် တပိုင်းပါ၊ ဒါမှမဟုတ် နယ်စည်းရုံးရေး ခရီးထွက်တာ ပင်ပန်းလို့ တတ်နိုင်သလောက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတာဆိုရင်လည်း နားလည်လို့ရနိုင်တယ်။
ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေ ဂါဝရပြုခြင်းဆိုတာ ပြားပြားဝပ် ခတွားနေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ထူထောင်ရာမှာ လူတိုင်းကိုယ်စီ ထိုက်သင့်တဲ့မာန လိုပါတယ်။ သိပ်ကြည်ညိုရင် အိမ်မှာဓာတ်ပုံချိတ်ပြီး ဦးချပါ၊ လူထုကို ပုံစံသွင်းမပြကြပါနဲ့။ စည်းရုံးရေအမြင်နဲ့ဆိုလည်း ပကာသန ဟိတ်ဟန်ကြီးတယ် မြင်သွားနိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာ တိုင်းပြည်ဂေါင်းဆောင်တွေ တမင်တကာတောင် အရပ်ထဲဆင်း ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်၊ ဈေးဝယ်ထွက်ပြ လုပ်ကြရသေးတာပဲ။ အိတ်လေးလို့၊ အိတ်များလို့ ကူမှဖြစ်မယ်ဆိုရင် အိတ်အပေါ့ကို ဘွားဒေါ် ကိုင်ပါစေ။ ကျုပ်တို့တတွေ ရုံးသွားရင် လူရှိန်အောင် လက်ဆွဲအိတ်တော့ ကိုင်ကြသေးတာပဲ။
ဘွားဒေါ်အကျိုး ဒို့သယ်ပိုး – ဓာတ်ပုံ အန်အယ်ဒီ
နောက်တခုက ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၊ ဒါကတော့ ကျုပ်ကိုယ်ပိုင် အမြင်ပါ။ တလက်စထဲမိုလို့ ပြောလိုက်တာ။ ဘွားဒေါ် ပုဝါစအရှည် ပုခုံးနှစ်ဖက်မှာ ချပြီး စတိုင်ထွင်တာ တွေ့နေရတယ်။ မြန်မာရိုးရာ ဖက်ရှင်မှာ အဲလိုမျိုး ရှိလို့လား၊ ကျနော် သတိမထားမိတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီစတိုင်မျိုးကို အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွေက ပန်ဂျင်နယ်သူတွေ အဝတ်များသလိုပဲ၊ ကျနော်ကတော့ အဲလို ဘွားဒေါ်ဝတ်ထားရင် သူတို့ပဲ သွားမြင်တယ်။ ပွဲလန်းသဘင်တွေမှာ ဂဒေါ်ဂျီးတွေ အလုပ်များတယ်၊ သူ့လောက်လဲ ပုဝါစ မရှည်ဘူး။ နိုင်ငံခြားသား အမြင်ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ နဂိုထဲကမှ ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာကို အိန္ဒိယလက်အောက်ခံ တိုင်းပြည်တခုအဖြစ် အမြင်မှားတတ် ကြတယ်လေ။
နောက်အလှည့် ကျသူက ၈၈မျိုးဆက်ဂေါင်းဇောင် ကျနော်တို့ ချစ်အကိုဂျီး မင်းကိုနိုင် ဖြစ်ပါတယ်၊ သူနဲ့အဖွဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ လေ့လာရေး ခရီးထွက်ကြောင်း သစ်ထူးလွင်မှာ ဖတ်ရတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ဆိုတာ အာဆီယံထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုဖက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့သူမို့ ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ် နိုင်ငံအရွေးမှန်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှာက ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဒို့အကိုဂျီး ရိုးရာဝါးတီးကုတ်နဲ့ ပုဆိုးဝတ်ထားလို့ပါ။ အကျင့်မရှိလို့ မပြောပါနဲ့၊ ဒါ ပုဂ္ဂလိက ခရီး၊ အပန်းဖြေ ခရီးမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုနိုင်ဆိုတာ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ပါ။ ပြည်ပခရီးစဉ်တွေမှာ ဆုနဲ့တိုင် အပြည့်အစုံ မဖြစ်တောင် ဘောင်းဘီလက်ရှည်နဲ့ ဖြစ်စေချင်တယ်။ အများအမြင်မှာ ခေတ်မှီပွင့်လင်း တိုးတက်တဲ့ ပုံရိပ်ပေါ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဇာဂနာလည်း ပုဆိုးဝတ်တာပဲ စောဒကတက်ရင် သူက တဦးချင်း လှုပ်ရှားသူ၊ သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်၊ မကောင်းတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့၊ တောင်းမှာအကွပ် လူမှာအဝတ်တဲ့၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံချိန်မှာ တိုင်းပြည်အကျိုး ထိရောက်စွာ သယ်ပိုးပေးနိုင်သူများ ခေတ်နဲ့အညီ ဝတ်စားဆင်ယင် စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံက စကပ်အရှည်နဲ့တူလို့ အမြင်မရိုင်း၊ တစိမ်းတရံ လက်ခံနိုင်တယ်။
ဒို့ကိုဂျီး ပုဆိုးတိုစည်း.. ဓာတ်ပုံ မိုးမခ
နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်သူက နိုင်ငံဒေါ်သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လ အိန္ဒိယခရီးအတွင်း သီပေါမင်း နေခဲ့ရာ ရတနာဂီရိ စံအိမ်သွားတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံမှာ သမဒဂျီး အပေါ်ကုတ်အင်္ကျီ မပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပုံစံသစ်နဲ့ တွေ့ရတယ်။ အလွတ်သဘော ခရီးစဉ်လည်းဖြစ်လို့ အလွန်သင့်မြတ်လှတဲ့အပြင် မြင်ရသူစိတ်ထဲ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှု ရိုးသားမှု စတာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း အဲသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စတိုင်မျိုးနဲ့ လမ်းပြပေးပါ။ တိုက်ပုံ၊ လည်ကတုံးတွေထက် ဖြစ်နိုင်ရင် စွပ်ကျယ်နဲ့ ဘောင်းဘီတိုဝတ် ( နောက်တာနော် တကယ်မလုပ်နဲ့) သပ်သပ်ရပ်ရပ် သာမန်ဝတ်ရိုး ဝတ်ဆင် ကောင်းတယ်။ သမဒဂျီး ပုံဖော်နေတဲ့ ပြုပြင်ရေး ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့လည်း ကိုက်ညီတယ်။ အောက်ခြေလူကြားထဲဆင်း အာဝါဒမရိုက်ခင် ကိုယ့်အတွင်းစည်းထဲမှာကို ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီး လုပ်မပြတဲ့အခါ သမဒရုံး ပေးခြင်တဲ့ သတင်းတဝက် အောင်မြင်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။ စကားအခွန်း ရာထောင်သောင်းထက် လုပ်ရပ်တခုက အဆပေါင်းများစွာ အင်အားပိုရှိပါတယ်။
သမဒဂျီး မာန်ချငြီး… ဓာတ်ပုံ သမဒရုံး
တကယ်တော့ဗျာ လူ့ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးပါ၊ အဲဒီအချိန်တိုမှာ ပကာသနကို မကြာခဏဆိုရင် အဟာရမချို ဗျာပါဒပိုဖို့သာ ရှိပါတယ်….။ (ဟိုက်.. ရှားဗား.. တယ်ဆိုတဲ့ စာပါလား.. :harr: )
အားလုံးကိုယ်စား ကျွန်တော်မောင်ကျောက်က ဖြေကြားပေးပါ့မယ်….
ဘွားတော်အပါးက ခြင်းကိုင် အိတ်ဆွဲ ကိုကို မမများက ကိုင်စရာမရှိရင် မနေတတ်တဲ့ရောဂါရှိလို့ ခွင့်ပြုထားရပါသတဲ့….
ပုဝါနှစ်စ အသာချတဲ့စတိုင်တော့ အပစ်မမြင်ပါနဲ့ဗျာ….
သူ့ခမျာ ချမ်းတတ်ရှာလို့ပါ…. မတော် ဒီစာဖတ်မိလို့ စောင်ပတ်ပြီး လွှတ်တော်တက်မှ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း….
ချစ်ကိုဂျီး ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပါ တဲ့…..
သမဒဂျီးကိုလဲ စွပ်ကျယ်နဲ့ ဘောင်းဘီတိုမဆင်လိုက်ပါနဲ့…
သူ့ခမျာ အပြင်ထွက်ရင် ငယ်ထိပ်ကိုခြင်ကိုက်လို့ တဗျန်းဗျန်းရိုက်နေရတာ….
ဒီကိစ္စ ဘယ်သူပြောမလဲနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတာကြာပြီ
-တလက်စတည်းဝင်ပွားလိုက်အုံးမယ် လက်ပန်းတောင်း ဘုန်းကြီးကိစ္စ ဦးကျော်သူသွားကြည့်တော့ အဲဒီမှာလိုက်ရှင်းပြတဲ့ ဘုန်းကြီးက ခွပ်ဒေါင်းလက်ပတ်ကြီးနဲ့ လူမြင်မကောင်းလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘုန်းကြီးက ဘွားတော် ကိုထိုင်ကန်တော့မယ့်သဘောရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်ဆို (တစ်ပါးလို့မသုံးချင်) ခွပ်ဒေါင်းပုံ ခေါင်းမှာ တက်တူးထိုးထားပြီးဆွမ်းခံကြွတယ် သာကေတမှာ – လူတွေကမဟုတ်တဲ့ နေရာမှာအင်အားပြချင်နေကြတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်က ဒေါ်စု ကို ချစ်သူမဟုတ်သလို မုန်းသူလဲမဟုတ်ဘူး မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်နဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ကောင်တွေကိုပဲ သောက်မြင်ကပ်တာ။ ဘုန်းကြီးလဲ ဘုန်းကြီးအလုပ်လုပ်ရင် ဘုန်းကြီးလိုဆက်ဆံမယ် ။ လူလိုလိုက်လုပ်နေရင် လူလိုပဲဆက်ဆံချင်တယ် ။ အခု ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ သူဘက်က တတ်နိုင်သမျှလိုက်လျှော အလျှော့ပေးနေပေမယ့် လူတွေကတော့ ဒေါ်စုမှဒေါ်စု ကျွန်တော်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုအတွက် ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုအဆင့်သင့်ရှိတယ် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆပ်တဲ့သဘောပေါ့ ။ အဲဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ဒေါ်စုကို ဘယ်လိုမှစာရင်းထဲထည့်လို့မရဘူး။
ဟတ်လား.. ဥသိန်းစိန်ဂျီး သဘောကောင်းလို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဗုံးတွေကြဲကုန်ပြီ.. အဲဒီဗုံးတွေက နတ်ပြည်က ကျလာတာလား… သိပ်လည်း သမဒဘောမ မချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ..။ ဘုန်းကြီး ခွပ်ဒေါင်းလက်ပတ် မဝတ်ကြေးဆို စစ်သားတွေလည်း စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ တဘက်ဖြူ မခြုံနဲ့လေကွာ.. အခုတော့ ခါးမှာတောင် ဗျောက်တန်းလန်းနဲ့…။ နေရာတိုင်းမှာ စုန်းပြူးဆိုတာ ရှိစမြဲဘဲ အခုပဲကြည့်လေ ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ဘာကောင်ဆိုတာ… အဲလိုမျိုး တတိယ ကြားလူ ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်နဲ့ ဟိုဘောမ ဒီဘောမတွေ ရိုးနေပြီ… :saut:
ဦးကြောင်ကြီးပြောသလိုဆို ကချင်ပြည်နယ်ကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားပြီးတော့ KIA အစိုးရ ကချင်နိုင်ငံဆိုပြီး ပေးလိုက်ရတော့မှာလား။ နိုင်ငံတစ်ကာမှာ သူပုန်ကို ညှိနှိုင်းလို့ရရင်ရမရရင်တော့ သူပုန်စာရင်းသွင်းပြီး နှိမ်နင်းရမှာပဲ ။တစ်ခုလောက်မေးပါစေ ဦးကြောင်ကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာလား ကျွန်တော်ကတော့ ထေရဝါဒစစ်စစ် ဗျ ။ ဘုန်းကြီးက ဘုန်းကြီးလိုနေတာကိုပဲလက်ခံတယ် ။ အဲဒါမှ ဗုဒ္ဓသာသနာ စည်ပင်ပြန့်ပွားမှာ ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့ ပါတီရူးနေလို့ကတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘုန်းကြီးပါတီလေးပါဖွဲ့ပေးလိုက်။ နောက်ပြီး ဒီက မီဒီယာတွေ ပိုက်ဆံရရင်ပြီးရော စစ်တပ်က KIA ကိုထုလိုက်တာပဲ သတင်းတင်နေကြတယ်။ဒါ မြန်မာနိုင်ငံလေ မြန်မာ့တပ်မတော်ပဲရှိတယ် KIA တပ်မဟာဆိုတာမရှိဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကျုပ်က လူငယ် မျိုးရိုးထဲမှာ စစ်သားမျိုးရိုးမပါဘူး။ အမှန်ကို ရှင်းရှင်းလေးမြင်နေတာ အစိုးရကောင်းရင်ကောင်းတယ် မကောင်းရင်မကောင်းဘူး ပြောရဲတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တူကြီးလျှင်ပေ လူကြီးလျှင် တေ ၊ လျှောင်ကြီးလျှင်ငိုက် လူကြီးလျှင်မိုက် ဆိုပြီး အမှန်ကိုမမြင်နိုင်တာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူး။ နောက်ပြီးဦးကြောင်ကြီးက ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ပါ တယူသန်တဲ့အတွေးမျိုးရှိနေရင် နှစ်ဖက်မြင်လို့ရတဲ့ ပိုစ့်မျိုးမတင်သင့်ဘူး။ တယူသန်ပိုစ့်ဆိုရင်လဲ ကျုပ်က အစောကြီးကတည်းက ဝင်မမန့်ဘူး။
ဒဂါဂျီးကလည်း ဆိတ်ချည်းပဲ.. နိုင်ငံတခုမှာ တပ်မဒေါ်တခုသာ ရှိရမှာ လူမပြောနဲ့ နွားတောင်သိတယ်၊ သိလို့လည်း စစ်တပ်ဝန် ထမ်းပိုးခြင်သူ မရှားဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဝတပ်ကိုကြတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ သူတို့ဆို ကေအိုင်အေထက် အများကြီး လက်နက်လူသူ နယ်မြေတောင့်တယ်။ ဒါကြတော့ ကောင်းရင်ကောင်းတယ် မကောင်းရင် မကောင်းဘူး ပြောရဲသူဂျီး ကြောင်တောင်ကန်းနေလား..
စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးမှာ အုပ်စီးထားရင် ဘုန်းကြီးတွေလည်း ဘဇာကြောင့် နေရာမယူနိုင်ရမှာလဲ။ အက်ရှင်တိုင်းမှာ ရီအက်ရှင်ဆိုတာ ရှိတယ်။ သာသနာစည်ပင်ပြန့်ပွားဖို့တို့ တိုင်းပြည်ဂျီး ချောက်ထဲမကျဖို့တို့ ဒါတွေလာဖောမနေနဲ့ ကိုယ့်လူ၊ အင်တာနက် မထွန်းကားခင်တုံးကပဲ ရွှီးလို့ရမယ် ဒီခေတ်မှာ ကီးဘုတ်တချက်နှိပ် ဖုံးတချက်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ အဖြစ်မှန် သိနေရပြီ။ ဘုန်းကြီး ဘုန်းကြီးလို နေစေချင်ရင် စစ်သား စစ်တန်းလျားပြန်၊ အရပ်သား အရပ်သားအလုပ်လုပ်ရတယ်။ ခင်ဗျား အခုပြောနေပုံက အောက်မှာဂွေးတန်းလန်းနဲ့ ခေါင်းပေါင်းစွပ်ပြီး စင်ပေါ်တက် တရားဟောသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဗျား အမျိုးထဲမှာ စစ်ကောင်ရှိရှိ သူပုံရှိရှိ ကျုပ်သောက်ဂရု မစိုက်ဘူး၊ အဲ.. တူမ၊ ညီမ အပျိုရှိရင်တော့ ဝဲလ်ကမ်းပါ။ ခင်ဗျား ကျုပ်ပို့စ် ဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ် မန့်မန့် မမန့်မန့် ကျုပ်ကြိုက်ရင်တော့ သူတို့ကို ယူမှာပဲ……………. အချောင်သမား သာကူးထက် ပိုဆိုးတဲ့ သိုးယောင်ဆောင် ဝံပုလွေတွေ ကျဆုံးပါစေ။ (ဟိုကောင်တွေထက် ပိုယုတ်မာလို့….) :grin:
ဦးကြောင် ထောက်ပြတာတွေ အကြမ်းဖျင်း လက်ခံပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အမေစု အသက်ကြီးပြီနော် ၊
နောက်ပြီး လူ ကလဲ အရမ်းပိန်တယ် ၊
စိတ်ဆောင်လို့သာ ဒီလောက်ကျန်တာထင်တယ် ၊
အလေးအပင် သယ်နိုင်တော့မယ် မထင်ဘူးဗျ ။
တကယ်က မှားနေတာက ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည် ဗျ ။
ခိုင်းစရာ ခေါင်းဆောင်က ရှားပါးလေတော့ ၊
ဒီ အဖွားကြီး အရွယ်ကိုပဲ ဖိ ခိုင်းနေရတယ် ၊ ဆိုးပါ့ ။
ကို မင်းကိုနိုင်တို့ ၊ ပုဆိုးဝတ်တာကတော့ ၊
တချို့ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေလဲ ၊
သူတို့ အမျိုးသား Identity ပြတဲ့အနေနှင့် ၊
ဝတ်ကြပါတယ်ဗျာ ။ အခန်းအနားတွေတော့ ဝတ်ပါစေလေ ။
တစ်ချို့ Personal Safety လိုတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ ၊
ဘောင်းဘီ မဝတ် မနေရပေါ့ဗျာ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. (အစဉ်အလာချေဖျက်တဲ့အနေနဲ့.) ဖိုင်..စာအုပ်တွေလောက်တော့..ကိုင်ထားသင့်တယ်ထင်မိတယ်…
နောက်ကအိပ်ဆွဲချင်သူကလည်း.. (အစဉ်အလာချေဖျက်တဲ့အနေနဲ့.. လိုက်ချင်ရင်တောင်) ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အထဲမပါလောက်တဲ့..တစောင်းခပ်လှမ်းလှမ်းကလိုက်သင့်တယ်..
ရှေးက.. ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု ပြည်ပခရီးတွေမှာ.. ပုဆိုး..တောင်ရှည်နဲ့ပါပဲ..
ဒီခေတ်မှာ.. ကိုမင်းကိုနိုင်ဒီလိုဝတ်တာ.. မှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်…
အမေစုလက်ထဲမှာပိုက်ဆံအိတ်ပိုက်ထားပါတယ်။မတွေ့ကြလို့လား။ အကျီ င်္နဲ့ဖက်ရှင်ဖြစ်နေလို့ ရောကွယ်နေတာလေ။ တကယ်လည်းအမေစုက အသက်ကြီးနေပါပြီ။ကိုင်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
ဆိုတော့.. ပိုက်ဆံအိပ်နဲ့..အကျီ်အရောင်ရောနေအောင် ဆင်ပေးလိုက်တဲ့.. ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအပြစ်ဖြစ်ပါကြောင်း…
သဂျီး… သတိထားအုံး… စိတ်တွေတစ်အားတက်ကြွပြီး ဒို့ဗမာ အစား ဒိုဘာမင် ဖြစ်နေဘီ…
ဟင့်… ခွေးလုံးလုံးဖစ်ပါပေါ့လား :harr:
ဒိုဘာမန် ဆိုတော့ မြီးတိုဂျီးပေါ့…
သမ္မတကြီးကို ချစ်တဲ့ကျွန်မကတော့ သမ္မတကြီးအတွက် ဂုဏ်ယူလျှက်ပါ။
ဒေါ်စုကတော့ အလှအပကြိုက်သူလို့ တင်စားကြသလို စတိုင်အသစ်တစ်မျိုးထုတ်ခြင်းလို့ မြင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဆိုတာတော့ မမေ့ထားစေချင်ပါဘူး။ ဟီးခြင်းဆွဲတာတေ့ မီးမီးလည်း မသိဘူး။ သူကြီးပြောသလို ဖိုင်လေးတော့ ကိုင်သင့်တာပေါ့နော်။ ဟိုတလောကတည်းက ဆောင်းပါးတခုမှာ ဒေါ်စုက ကတော်တွေလို ဘာမှ ပဲများပြီး ကိုင်မထားဘူးလို့ ယှဉ်ရေးတာကို ဖတ်ပြီး ပြောချင်စိတ် ကလိကလိဖြစ်နေတာ ဦးကြောင်းကြီးက ထောက်ပြလိုက်တာပေါ့။
ဦးမင်းကိုနိုင်ပုဆိုးဝတ်တာကတော့ ပုံမကျ၊ပန်းမကျနဲ့ Suite ကြီးဝတ်ထားသူတွေနဲ့ စာရင် အများကြီးတင့်တယ်သည်လို့ မြင်ပါကြောင်း။။။။
အောင်မငှီး … အူးကြောင်ရဲ့ .. တောင်းမှာ အကွပ် .. လူမှာ အ၀တ်ဆိုလို့ ..ပြောရပါဦးမယ်တော် … တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနက်က အရူးဖက်ရှင်တွေ့ခဲ့လို့ … အတော်လေးအော်ဂလီဆန်ချင်သလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် … ။
ဘယ့်နှာအရူးက … ချမ်းအေးတဲ့ ဆောင်းမနက်ခင်းကြီး ၊ ဘုရင်နောင်မီးပွိုင့်နားလို လူစည်တဲ့ နေရာမှာ … ဖလား ဖလား … naked နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတာ … ။ ရေစို အ၀တ်ကြီးလား ဘာလား အဲ့ဒါလည်းကိုင်မြှောက်ယမ်းဆော့နေလိုက်သေးတယ် … ။ရုံးကားပေါ် ထိုင်ငိုက်ရင်း ဘေးကတစ်ယောက် လက်ကုတ်ပြလို့ ကြည့်လိုက်ပါတယ် … မူးချင်သလိုလို ဖြစ်သွားတယ် :eee: ဒါတောင် ဓါတ်တိုင်တစ်တိုင်လောက်ကွာပေလို့ပဲ
ဦးကြောင်ရယ် ခေတ်ကိုက ဖက်ရှင်ဖြစ်နေတာလေ
နောက်ပိုင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးတွေထဲက အမျိုးသမ္မီးကြီးတွေဆို အန်တီ စတိုင်တွေဖြစ်နေပြီ။
လူငယ်တွေဆိုလည်း ဘာရယ်မဟုတ် ပဆိုးနဲ့လည်ဂတုံးဝတ်နေတဲ့သူတွေများနေပီလေ။
ကိုကြောင်ကြီးရေ ပို့စ်ကတော့ ရေရေလည်လည်ကို မိုက်တယ်ဗျာ။ ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းတဲ့ ဟာမျိုးပဲ။ ဆွဲထားတဲ့ခြင်းတွေ ကြည့်ရတာ နည်းနည်းလေးပုံရတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းလေးတော့လဲ သူ့အနေနဲ့ ဆွဲရင် ပင်ပန်းမှာ ဖြစ်သလို အမြင်မတင့်တယ်လို့ ဆွဲတဲ့လူတွေ ရှိတာနဲ့ တူပါတယ်။ ဆွဲတဲ့လူတွေလဲ သဂျီးပြောသလိုပဲ နည်းနည်းလေး ခွာပြီး လိုက်သင့်တယ်ဗျ။ ဖိုင်လေး ဘာလေးတော့ ကိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ မေ့သွားလို့ ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ ပမာဒလေခ ဆိုသလို ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်တာနဲ့ တူပါတယ်။
တချို့လွှတ်တော်အမတ် ကျတော့လဲ ဇဝနဥဏ်ကြွယ်တဲ့ လူမျိုးဟာ ဖိုင်တွေ ဘာတွေ သိပ်မကိုင်တာလည်း ရှိတော့ ရှိတယ်ဗျ။ ပြောရမယ့် မိန့်ခွန်းကို ရေးလာတဲ့ စာရွက်လည်း မရှိပဲ ဖိုင်လည်း မကိုင်ပဲ လက်တန်းပြောတာ အချက်အလက် စုံပြီး နားထောင်လို့ ကောင်းလွန်းလို့ ပုံနှိပ်စာအုပ် ရိုက်ပြီး ရောင်းရတဲ့လူမျိုးလည်း ရှိသေးတာကိုး။
ပုဝါနှစ်စ အရှည်စုံချထားတာလည်း အပြစ်မတင်ပါနဲ့ဗျာ။ သူက မိန်းမသားလေဗျာ။ မိန်းမသားရဲ့ အတွင်းစိတ် ဆိုတာက ဘယ်အရွယ် ဘယ်ရာထူးဖြစ်ဖြစ် လှချင်ပချင် သပ်ရပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကလေးတော့ ရှိရှာတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ကတော့ စတိုင်ထုတ်တာကို အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။ စတိုင်လေးတွေလည်း လှတော့ လှသားပဲဗျ။ ဝက်ဝံရွှေရည်နဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့ဗျာ။ သူ့အရွယ်နဲ့တော့ တင့်တင့်တယ်တယ် ရှိပါတယ်။
အဟုတ်ပြောတာ ကျနော့်ကိုသာ အခု အဲဒီလို ရာထူးမျိုးမှာ တီဗီရိုက်ပြီး သတင်းထဲ ထည့်လို့ကတော့ ပါလီမန်မတတ်ခင် ဆံပင်ကို ကျကျနန ခွဲပြီး မျက်နှာမှာလည်း ချွေးတွေ ဘာတွေများ ရှိနေသလားဆိုပြီး အရေးတကြီး လုပ်မိမလားပဲ။ မိန်းမသားက လှချင်တာတော့ အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။
ပဝါနှစ်စ စုံချတာတော့ ရှင်လောင်းမယ်တော်တွေ ဘာတွေလည်း လုပ်ပါတယ်။ ကြာတော့ ကြာပါပြီ။ တော်ကြာ အိန္ဒိယကလား မြန်မာပြည်ကလား ဆိုပြီး ငြင်းနေရဦးမယ်။ ဒါတော့ ထားလိုက်ပါ။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့ နိုင်ငံခြားသွားတာ မြန်မာဝတ်စုံထက် ဥရောပ ဝတ်စုံဆို ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒါတော့ ကျနော်လည်း သဘောတူတယ်။ ဒါလည်း သိပ်တော့ ရေးကြီးခွင်ကျယ်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ မြန်မာပြည် အာဆီယံထဲ ဝင်ခွင့်ရတုန်းကလည်း စင်မြင့်ပေါ်မှာ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက ကုတ်အကျီ နက်ကတိုင် ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက တောင်ရှည်ပုဆိုးကြီးနဲ့ ဆိုတော့ တမျိုးကြီးပဲ။ ကျနော့် အမြင်တော့ မျိုးချစ်စိတ်က အဝတ်အစားနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးမကျပါဘူး။ ကျနော်ဆို မြန်မာဝတ်စုံထက် ဥရောပဝတ်စုံကို ပိုကြိုက်သလိုပဲ။
ပို့စ်ကတော့ ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ ပါးပါးနပ်နပ်လေးလုပ်ဗျ။ ဒီပို့စ်က critical နည်းနည်း ဖြစ်တယ်ထင်တာပဲ။
ဥကြောင်ရီးး တင်ထားတဲ့ ပုံဒွေဒဲ
ပြူးပြဲပြီး လိုက်ရှာကျည့်ဒါ ..
တီယောက်မှလည်း ချောဒါ တွေ့ဘူးး
ဘွားဒေါ်ခြင်းတောင်းဆွဲပေးတာကတော့ ဘွားဒေါ်ကိုကြည်ညိုလွန်းလို့ နေမှာပေါ့ဗျာ
ကိုမင်းကိုနိုင် ရဲ့စတစ်ကော်လံနဲ့ ပုဆိုးပဲ ပြောစရာအဖြစ် မြင်မိပါတယ် / ရောမရောက်ရင် ရောမလို ကျင့်ရပေမပေါ့
အိတ်ကိုင် ထီးမိုးပေးတာ ပြသနာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
အခုလဲ ပုံထဲ မှာ အိတ်ကလေးတော့ ကိုင်ထားသားဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အပြစ်တင်လိုသူတွေ ပြောစရာဖြစ်မှာ အမှန်ပါ။
ကကြောင်ပြောသလို အိတ်ကိုင်သူက လူမမြင်အောင် နေတာ ပိုပြီးတင့်တယ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နုနုရွရွ ကလပ်ပေါ်မှာ ကြွကြွလေး ထားတဲ့ ဘုရင်မလို ထက် ဒါးကိုင်ထားပြီး ဘာမဆိုရင်ဆိုင် ဖို့ မာန်ပါတဲ့ ဘုရင်မလို ပုံစံမျိုးကိုတော့ ပိုပြီး မြင်ချင်ပါရဲ့။
အရင်က ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံကို တော်တော်များများ ပြန်ဝတ်လာတာ တွေ့ရတာတော့ အင်မတန် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူဖွယ်ပါဘဲ။
ကြုံတုန်းလေး ပုံထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝတ်ထား တဲ့ ဝတ်စုံ လေးများ ဘယ်က ဝယ်လဲ မေးပေးပါလား။
လှသူဝတ်တော့ ပိုပြီး လှနေတာလဲ ပါမှာပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀တ်ထားတဲ့ဝတ်စုံက အရီးလတ်ဝတ်ရင်လဲ ကြည့်ကောင်းမှာ ..
အရီးလတ်က အသက်ပိုငယ်တော့ ပိုလို့တောင် လှဦးမယ်လို့ မြင်ယောင်မိပါတယ် …
ဟိ ဟိ။ Comment of the YEAR!!!
ချစ်ညီမလေး ဝေဝေ ကို အနားမှာရှိရင် ဖက်နမ်းပစ်လိုက်တယ်။
ဒီလို အသံလေးကြားရတာ စိတ်ကျရောဂါ သက်သာပါ၏။
ကကြောင်ကြီး ဝေဝေ့ ရဲ့ မှတ်ချက်လေးကို အစိမ်းရောင်လေး များ ချယ် ပေးသင့်တယ် မထင်ဘူးလား။
မိုချို့ ပြောသလို ဘဲ ကချင်ဝတ်စုံလေး မှာ အဓိပ္ပါယ်အများကြီးပါပါတယ်။
အဲဒါ ကချင် ရိုးရာဆင်လေးနော်။ ကချင် အရေး အတွက် ပစ်မထားဘး ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။
Ralph Waldo Emerson တဲ့..။
ဘွားဒေါ်နဲ့ဆိုင်လို့ ပြောချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျက သူ့လူများ အင်ဒီပန်းဒန့် ဖြစ်ဖို့ပါ။ ပုံထဲမှာကြည့် ဇေယျာသော် နှစ်အိတ်ကိုင်ထားတယ်၊ အနောက်က ပုဂ္ဂိုလ် တအိတ်ကိုင်ထားတယ်၊ ဒေါက်တာတင်မာဝင်းကတော့ သူ့အိတ်သူ ကိုင်ထားတာ ဖြစ်မယ်။ ဇေယျာသော်လက်ထဲက တအိတ် သူကိုင်မထား သင့်ဘူးလား။ နိုင်ငံရေး သမားဆိုတာ ပက်ဗလစ်စီတီကို သိပ်အလေးထားရတယ်။ ဘွားဒေါ်ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံရေး သမားဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြီ၊ ရွေးကောက်ပွဲလည်း ဝင်တယ်၊ အာဏာယူမယ်လည်း ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ နိုင်ငံရေးဂေါင်းဇောင်ဆိုတာ လူရှေ့မှာ စမတ်ကျကျ နေပြရတယ်။ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးရုံတက်ရင်တောင် အမြန်ဆုံး ရက်တိုတိုနဲ့ ဆင်းပြေးရတယ်၊ လူအမြင်မှာ နာမကျန်း အားနည်းသူ အဖြစ်မခံနိုင်လို့…။ ဒီမိုကရက်တစ် ပတ်ဝန်းကျင်တခုမှ ဂေါင်းဇောင်တယောက် ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်းပြတာနဲ့ (အနည်းဆုံး ဟန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပစေအုံး) သူများ သယ်ပိုးပေးနေတဲ့ ပုံရိပ် ဘယ်ဒင်းက သာမယ်ထင်သလဲ၊ ဘယ်ဒင်းက ပိုမှန်တယ် ထင်သလဲ။ ဘွားဒေါ်ကိုယ်တိုင်လည်း လူတွေကို သတ္တိရှိဖို့ အမှီအခိုကင်းဖို့ တိုက်တွန်းနေတာပဲဟာ၊ စစ်ဗိုလ်တွေလို အမိန့်နာခံဖို့ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ စနစ်ထူထောင်ဖို့ ပြောနေရင်တော့ တမျိုးပေါ့။
ခြစ်ကိုဂျီး မင်းကိုနိုင် ဖိလစ်ပိုင် ကာချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ အနောက်တိုင်း ဝတ်စုံပြည့် ဝတ်ထားတာ တွေ့တယ်။ ကြည့်ရတာ သူ့မှာ ဘောင်းဘီတထည်ပဲရှိလို့ ရန်ကုန်က အထွက် ပုဆိုးဝတ်သွားပုံရတယ်။ သဂျီးပြောတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု တောင်ရှည်ပုဆိုးဝတ် နိုင်ငံခြားခရီးထွက်တာ သူ့ခေတ်တုံးက မြန်မာရွှေခေတ်ဗျ၊ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံး အလားလာအရှိဆုံးနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သွားတယ်။ အခုဟာက ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး ပဋိပက္ခသိပ်များနေတဲ့ တိုင်းပြည်က အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ သွားရတာ အခြေအနေခြင်းလုံးဝ မတူဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ ငါကွလို့ မော်လို့ရနိုင်ပါ့မလား။ အကဲဖြတ်တွေအမြင်မှာ သဘောထားပြည့်သူ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတတ်သူ လူဝင်ဆံ့သူအဖြစ် ပုံဖော်ပြရမယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ နည်းပညာထွန်းကားတယ် နည်းစနစ်တွေ တိုးတက်တယ် ပြောပြော ဘက်လိုက်မှု မကင်းတဲ့ လူတွေလုပ်ရတာမို့ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်သုံးသပ်ချက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် http://blog.irrawaddy.org/2013/01/blog-post_5825.htmlထဲကနေ ကိုဂျီး ကြောင်လျှာသီး ရင်ဘတ်မှာချိတ်ထားတဲ့ ပုံတပုံလောက် သဂျီးတန်ခိုးနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ပေးပါဗျာ။
ဘိုးတော်ဂျီး ..အသက်ရလာပြီးဆိုတဲ့သဘောပဲ.. အိမ်ကအဘိုးအတိုင်းပဲ..သူများဒါဝတ် ၀တ်လို့ ..ဒါလုပ်..လုပ်လို့…ဟိုသွား..သွားလို့ …